Client Showcase: Hotel New Wave | Zeagwat, Inc.
Client Showcase: Hotel New Wave
မင်္ဂလာပါ…………. မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဒီဇင်ဘာရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ အေးအေးဆေးဆေးအပန်းဖြေလည့်ပတ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးမြို့ရှိ ခန့်နားသပ်ရပ်လှပပြီး၀န်ဆောင်မူကောင်းတဲ့ Hotel New Wave နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ Hotel New Wave Website (https://www.hotelnewwave.com) ဒီဇိုင်း ကို ကျွန်တော်တို့ ဇီးကွက်မှ ဖန်တီးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Hotel New Waveမှာဆိုရင် မန္တလေးမြို့ရဲ့ ည မီးရောင်းစုံအလှကြည့်ရင်း လေညှင်းခံဖို့ Rooftop Bar and Restaurant လဲပါရှိပါသေးတယ်။ မန္တလေးကျုံးထောင့်မှာ ရှိတာဖြစ်တာကြောင့် Rooftop Bar ရဲ့ View ကတော့ ကျုံးကို Panorama ကြည့်နေရသလိုပဲ အရမ်းကို လှပါတယ်။
Project URL: https://www.hotelnewwave.com
Zeagwat Inc. မှ Hotel New Wave အတွက်လုပ်ပေးဖြစ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေက…
Customer စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရတဲ့ Dynamic Web Design
Website Security and Backup Serviceအစရှိတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Contact Us :+959770126660 | +959977829744
Email : info@zeagwat.com | sales@zeagwat.com